Liiska Shaqooyinka Faa'iidada leh ee Haweenka 2021 – Shaqodoon
Liiska Shaqooyinka Faa’iidada leh ee Haweenka 2021
Haye, miyaad ka warqabtaa in haweenku baddalayaan hirarka suuqa ganacsiga? Si kale haddii loo dhigo, shaqooyinka ganacsiga adduunka ayaa isbedelaya haweenkuna waxay noqonayaan madax iyaga u gaar ah. Waxaad ka akhrisan doontaa caddeyn halkan Liiska Shaqooyin Ganacsi oo Faa’iido u leh Haweenka 2021.
Waqti dheeri ah, waxaa la aaminsanaa in shaqada ugu wanaagsan ee dumarka ay tahay dhinacyada caafimaadka iyo daryeelka ilkaha, waxbarashada, daryeelka xoolaha, sharciga, iyo ganacsiga. Xaqiiqdii, dhaqamada Afrika qaarkood, waxay ahayd fikrad guud oo ah in dumarka loogu tala galay jikada. Tusaale ahaan, daraasad guud oo ay sameeyeen Ururka Haweenka ee Jaamacadda Mareykanka (AAUW) ayaa lagu ogaaday in 2017, shanta shaqadood ee ugu sarreysa haweenka ee Mareykanka ay ahaayeen kalkaaliyayaal diiwaangashan, xoghayeyaal iyo kaaliyeyaasha maamulka, macallimiinta dugsiga hoose iyo dhexe, wakiillada adeegga macaamiisha. , iyo kormeerayaasha shaqaalaha tafaariiqda. Laakiin adduunku waa mid aan la dafiri karin oo isbeddelaya, iyo heerar sare oo shaqooyin ganacsi oo faa’iido leh ayaa markii dambe lagu xukumay haweenka. Tani waa sababta oo ah sinnaan la’aanta jinsiga hadda waxay leedahay saameyn yar marka ay timaado ganacsiga.
Marka baahida degdegga ah ee loo qabo shaqaale xirfad leh ayaa fursado badan u abuurtay haweenka inay soo galaan oo horumariyaan xirfadahooda. Sidoo kale, kordhinta tirada guud ee haweenka loo shaqaaleeyay waxay gacan ka gaysatay xiritaanka farqiga aan loo baahnayn ee wax soo saarka shaqada dhawr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay.
Qoraalkan, waxaan uga hadli doonnaa wax badan iyo in ka badan oo ku saabsan liiska shaqooyin ganacsi oo faa’iido badan dumarka 2021, kuwaas oo qaarkood shaki la’aan ay yihiin kuwa ugu baahida badan xirfadaha xirfadeed ee maanta. Intaas waxaa sii dheer sida ay waxbarashadu kaaga caawin karto inaad cagta gasho albaabka. Ina keena!
Maxaa Shaqooyin Ganacsi oo Qaali ah loogu talagalay Haweenka 2021?
Xirfadaha xirfadaha waa xulashooyin xirfadeed oo heer sare ah oo loogu talagalay dumarka sababo dhowr ah awgood. Qaar badan oo ka mid ah sababahan ayaa shaqsiyan si gaar ah u yaqaan. Tusaale ahaan;
Xiisaha ganacsiga: Haddii aadan jeclayn fikradda ah inaad ku shaqeysid halbeeg isla markaana aad ku raaxeysato inaad gacmahaaga kula shaqeyso jawi dhaqso leh, ganacsi xirfad leh ayaa kuu noqon kara xirfad kugu habboon. Maalin kasta shaqada way ka duwanaan kartaa, iyo sidoo kale caqabad. Laakiin haddii aad ku barwaaqowdo goobta shaqada oo kale, waxay noqon kartaa waddo shaqo oo abaalmarin leh.
Amniga Shaqada: Si ka duwan xirfad kale, way kuu fududdahay inaad ku sii taagnaato shaqadaada xirfado xirfad leh. Tani waa sababta oo ah had iyo jeer waxay noqon doontaa dalab. Si kastaba ha noqotee, tayada gaarka ah ee shaqada ayaa si aad ah loogu talinayaa. Markaa si aad u sii ahaato mid guuleysata maaddaama ay weli jiraan tartamo badan oo halkaas ka jira.
Meel sare oo bulsho ama dhaqaale: Barashada xirfad xirfadeed miyay ka dhigan tahay inaad qabanayso isla shaqo isla markaana aad isku mushahar ku qaadanaysid xirfaddaada oo dhan? Maya, maahan qasab. Waxaa jira fursado badan oo ka dhex jira warshadaha ganacsiga gaarka ah ee dhaqdhaqaaqa kor u kaca. Si kale haddii loo dhigo, jagooyinka maaraynta iyo kormeerku waa wax caadi ah oo laga heli karo shaqooyin badan oo xirfad leh, taas oo macnaheedu yahay inaad kasban karto ilaa lix-lambar oo mushahar ah haddii aad sidaas rabto oo aad u shaqeyso si ku filan.
Iskuulaad Yar: Waqtiga ay ku qaadaneyso in lagu galo xoogsatada iyada oo ganacsade ah oo waxbartay oo la daba joogo ay aad uga yaraan karto waddooyinka kale ee xirfadaha, iyo mushaharka ka dhexjira warshadaha xirfadaha leh ayaa la barbar dhigi karaa kuwa kale ee u baahan shahaado afar sano ah oo ka socota jaamacad si wanaagsan loo aqoonsan yahay. Muddada waxbarashada oo gaaban waxay ka dhigan tahay waqti yar oo lagu qaatay fasalka iyo fursad wanaagsan oo lagu ilaalin karo deynta amaahda ardayga ugu yaraan.
Shaqaalaha Xirfadaha-Ganacsiga Aan Ku Filnayn: Xilligan waxaa jira yaraanta shaqaale xirfadlayaal ganacsi oo adduunka ah, xitaa Mareykanka, shaqabixiyeyaashuna waxay u hamuun qabaan musharrixiin u qalma. Inta badan shaqaalaha ka shaqeeya xirfadaha xirfadaha maanta way gaboobayaan waxayna ku dhowyihiin dhamaadka shaqadooda, taas oo kordhin doonta baahida. Dhanka kale, markii waqtigu ka dhamaado loo shaqeeyaha ayaa loo baahan yahay si loo buuxiyo boosaskan. Shirkado badan ayaa fiirinaya dumarka tirada yar ee haweenka si ay uga baxaan. Haweenka gaar ahaan waa hanti qiimo leh maxaa yeelay kala duwanaanta goobta shaqadu waxay lagama maarmaan u tahay shirkad si wanaagsan u dhisan. Fikradaha kala duwan ee aragtida iyo fikradaha beddelka ayaa keena natiijooyin aad u fiican. Xaqiiqdii, shirkadaha leh jawi shaqo oo kaladuwan ayaa kafiican kuwa leh tirakoob xadidan.